तीन अमेरिकी पत्रिकासँग आबद्ध पत्रकारलाई चीनमा काम गर्न प्रतिबन्ध
बेइजिङ । अमेरिकामा केही चिनियाँ सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रत्युत्तरमा चीनले तीन अमेरिकी पत्रिकासँग आबद्ध पत्रकारहरूलाई आफ्नो मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय बुधबार गरेको छ ।
चीनले तीन पत्रकारको परिचयपत्र रद्द गर्यो
एजेन्सी । चीन विरोधी सामग्री प्रकाशित गरेको अभियोगमा चीनले तीन जना पत्रकारको परिचयपत्र रद्द गरेको छ । ‘द वालस्ट्रिट जर्नल’मा कार्यरत पत्रकारको परिचयपत्र रद्द गरेको हो ।
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको हुबेई प्रान्तमा आइतबार एकै दिनमा १०० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाले चीनबाट आउनेहरुलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको छ ।
एजेन्सी । विश्वव्यापी बन्दै गइरहेको कोरोना भाइरसबाट चीनमा मृत्यु हुनेहरुको संख्या शनिबारसम्ममा २ सय ५९ पुगेको छ ।
किन बन्द भए चीनमा एकैपटक ७० हजार फिल्म हलहरु ?
एजेन्सी । छिमेकी राष्ट्र चीनमा यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । यस भाइरसका कारण चीनमा ५६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने झण्डै २ हजार जना भाइरसबाट प्रभावित छन् ।
चीनमा वृद्धहरूको संख्या २५ करोड पुग्यो, लचिलो बीमा योजना तयार गर्दै सरकार
एजेन्सी । चीनमा यतिबेला ६० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धहरूको संख्या २५ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । यिनीहरूको लागि ठूलो मात्रामा वाणिज्य पेन्सन बीमाको आवश्यकता पर्ने भएको छ ।
चन्द्रमाको अँध्यारो हिस्सामा यान पठाउने पहिलो राष्ट्र चीन
चाङ ई यान
एजेन्सी । चन्द्रमाको अँध्यारो हिस्सामा यान पठाउने पहिलो मुलुक चीन बनेको छ । जनवरीमा चीनको ‘चाङ ई यान ’ दक्षिणी ध्रुबमा पुगेको हो ।
कति पुग्यो चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चिती ?
बेइजिङ । चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चिती यसै वर्षको नोभेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा ३० खर्ब ९५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याँकमा यसै वर्षको जनवरीदेखि यस्तो सञ्चितीमा २२ अर्ब ९० करोड डलरले वृद्धि भएको अर्थात् शून्य दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।